မယောင်ရာ ဆီမလူးကြနဲ့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မယောင်ရာ ဆီမလူးကြနဲ့ 
Posted by phone_kyaw on Feb 8, 2012 in Copy/Paste | 10 comments
ငါ့အတွက် ဘာများ ရလဲ။ ဒီလိုမျိူးအကယ်ဒမီပေးပွဲကို ကြည့်တဲ့ အတွက် ဗဟုသုတရလား၊ ပညာရလား၊ ပျော်ရွှင်မှုရလား၊ စိတ်ချမ်းသာမှုရလား စသဖြင့်…ဘာများရလဲလို့ တွေးမိနေတယ်။
တခြားတိုက်ရိုက်လွှင်သင့်တဲ့ အရာတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ ဥပမာဗျာ မီးလောင်တာ၊ ရေးကြီးတာ၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလက်မှတ်ထိုးတာ…စသဖြင့် ဒီလိုမျိူး နိုင်ငံနဲ့ လူမျိူးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ သတင်းတွေကို မလွှင့်သင့်ဘူးလား။ အကယ်ဒမီပွဲကပဲ အရေးကြီးဆုံးလား။ ဝန်ကြီးတွေ ဖွန်ကြောင်ဖို့အကယ်ဒမီပေးပွဲတက်တာလား။
ဖြစ်ပုံက.. အဲဒီရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုကို.. အစိုးရကကမကထပြု… လုပ်နေတာပဲ..။ ဒါက.. မဆလခေတ်ရဲ့..အမွေတခုလို့ထင်တယ်..။ ဒီတော့..၀န်ကြီးတွေ..၀န်ထမ်းတွေ.. ပါရတေ့ာတာပေါ့…။
( ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၊ ဂီတအစည်းအရုံး။ ဆင်ဆာအဖွဲ့..သဘင်.. ဘာညာတွေက.. အစိုးရပိုင်လို့..ယူဆမိပါတယ်.။ -မဟုတ်ရင်ပြင်ပေးပါ)
ဘယ်ကဘတ်ဂျက်နဲ့လုပ်နေသလည်း.. ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်သုံးလိုက်သလည်း.. ထုတ်ပြန်ဖို့ကောင်းပါတယ်..။
အဲဒီငွေတွေက..လူထုပိုင်ငွေတွေဖြစ်တာမို့(ဖြစ်မယ်ဆိုရင်). နှမြောစရာကောင်းတာတော့ အမှန်ပါပဲ..။
ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတခုခု.. အသင်းအဖွဲ့တခုခုက. NGO, NPO တို့က… လွှဲယူပြီးလုပ်သင့်တယ်..။ အစိုးရက.. ဘက်ဂျက်ရှာတာမှာ.. . ရုံးအဟောင်းတွ..သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦတွေ.. ထုတ်ရောင်းနေတာနဲ့စာရင်.. ဒီလိုအကယ်ဒမီပေးပွဲမျိုး .ပွဲလုပ်ခွင့်ကို.. .လေလံခေါ်ရောင်းသင့်တယ်..။
လေလံအောင်တဲ့..အဖွဲက….. တီဗီမှာလွှင့်တာ.. ဘာညာ.ကုန်ကျစရ်ိပ်ကာမိအောင်… . ကြော်ငြာကောက်ပေါ့..။ သာမန်အားဖြင့် ဒီလိုပွဲမျိုးက.. လူကြည့်များမှာမို့.. အမြတ်ကျန်မှာ အသေအချာပါပဲ…။
ဒါကို မလုပ်ရဘူးဆိုပြီး ပိတ်ပင်၇ရင်တော့.. လူထုအတွက်မတရားပါဘူး..။
ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်တာမို့.. လူထုအတွက်..ရှိသင့်..ရှိထိုက်တာတော့ အမှန်ပါ..။
Very good idea Mr Kai. I want Mr San to read this comment and think about it. Very good contribution.
ရေးထားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ် ကိုဘုန်းကျော်……….ဆက်လုပ်ဗျာ
ရှင်နဲ့လိုက်မဲ့ အမည်လေးတခုတော့ ပေးလိုက်ချင်သား…………………….၊
ဒီပို့စ်နဲ့ သဂျီးမင်းတရားကြီးရဲ့ ကော်မန့်ဟာ
ဒီလိုမျိုး တစ်ခါမျှ နားမလည်မိခဲ့ဘူးပါဘူး
မှန်တာပြောရပါသော် ယခုရေးသော ရေးသားချက် အဓိပ္ပါယ် ကောင်းပါ၏ ။
ဖြစ်သင့်တာကြာပါပီ..အကယ်ဒမီပွဲ နဲ့ သမ္မတတွေ ၀န်ကြီးတွေဆိုတာ..
“ တခြားနိုင်ငံက အကယ်ဒမီပေးပွဲတွေမှာ ဝန်ကြီးလည်းမတွေ့ ဘူး။ သမ္မတလည်းမတွေ့ ဘူး။ ဝန်လေးလည်း မတွေ့ ဘူး။ သူတို့ ကိုတွေ့တဲ့နေရာက တကယ်ဒုက္ခတွေ့ နေရတဲ့ နေရာတွေမှာ ကူညီပေးနေတာကိုပဲ တွေ့ တယ်။“……..အဲဒီအချက်ကအထိရောက် ဆုံးဘဲ ဗျ..ထောက်ခံပါတယ်…
ဒါက အကယ်ဒမီ နောက်နှစ်မှာ ရချင်ကြလား လာထား…………………………….လာထား….လာထားလို့ပြော…နေသလို
ပါဘဲလေ…ဒီကြား မှာ ကို ကျော်သူ လုပ်ရပ်နဲ့ ရပ်တည်ချက်ကလဲ မှတ်သားလောက်ပါပေတယ်
မြန်မာပြည်မှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဆိုတာတွေဟာ အရှက်နဲသူတွေများပါတယ်